Bible Mu Nsɛm Ɔdɔ Mmofra Nkumaa - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ Yesu a waso abofra no mu afam ne ho. Wutumi hu sɛ Yesu ani gye mmofra nkumaa ho. Mmarima a wɔrehwɛ no no yɛ n’asomafo. Dɛn na Yesu reka akyerɛ wɔn? Ma yɛnhwɛ.
Na Yesu ne n’asomafo no fi kwan tenteenten abedu a ɛnkyɛe koraa. Ɔkwan no so no asomafo no gyee akyinnye bi. Enti bere a wobedui no Yesu bisaa wɔn sɛ: ‘Dɛn na mugyee ho akyinnye wɔ kwan so no?’ Ná Yesu nim ade a wogyee ho akyinnye no. Nanso obisaa asɛm yi hwɛe sɛ asomafo no bɛka akyerɛ no anaa.
Asomafo no anka, efisɛ wɔ kwan so no na wɔregye nea ɔyɛ kɛse wɔ wɔn mu ho akyinnye. Ná asomafo no binom pɛ sɛ wɔyɛ akɛse sen afoforo. Ɔkwan bɛn na na Yesu bɛfa so aka akyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ papa sɛ wɔhwehwɛ sɛ wɔbɛyɛ akɛse?
Ɔfrɛɛ abofra kumaa de no gyinaa wɔn nyinaa anim. Afei ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: ‘Mepɛ sɛ muhu eyi yiye sɛ, Sɛ moansakra anyɛ sɛ mmofra nkumaa a, morennya Onyankopɔn ahenni no. Onipa a ɔyɛ kɛse wɔ ahenni no mu no ne nea ɔte sɛ abofra yi.’ Wunim nea enti a Yesu kaa eyi?
Asɛm no ne sɛ, mmofra nkumaa nnhaw wɔn ho sɛ wɔbɛyɛ akɛse asen afoforo. Enti ɛsɛ sɛ asomafo no sua sɛ wɔbɛyɛ te sɛ mmofra na akasakasa amma wɔn ntam wɔ nea ɔyɛ kɛse wɔ wɔn mu ho.
Mmere afoforo nso wɔ hɔ a Yesu kyerɛɛ sɛnea osusuw mmofra nkumaa ho. Asram kakraa akyi no nkurɔfo bi de wɔn mma baa Yesu nkyɛn. Asomafo no bɔɔ mmɔden sɛ wobesiw wɔn kwan. Nanso Yesu ka kyerɛɛ n’asomafo no sɛ: ‘Momma mmofra no mmra me nkyɛn, na munnsiw wɔn kwan, efisɛ nnipa a wɔte sɛ wɔn na Onyankopɔn ahenni no yɛ wɔn dea.’ Afei Yesu yɛɛ mmofra no atuu, na ohyiraa wɔn. So ɛnyɛ anigye sɛ yehu sɛ Yesu dɔ mmofra nkumaa?
Dɛn na asomafo no regye ho akyinnye bere a wofi wɔn kwan tenteenten no reba no?
Adɛn nti na Yesu frɛ abofra kumaa de no gyina asomafo no anim?
Ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ asomafo no sua sɛ wɔbɛyɛ te sɛ mmofra?
Ɔkwan bɛn so na asram kakraa bi akyi no Yesu kyerɛe sɛ ɔdɔ mmofra?
Kenkan Mateo 18:1-4.
Adɛn nti na Yesu de mfatoho kyerɛkyerɛe? (Mat. 13:34, 36; Mar. 4:33, 34)
Kenkan Mateo 19:13-15.
Sɛ yɛpɛ sɛ yenya Ahenni nhyira no bi a, dɛn na ɛsɛ sɛ yesua wɔ mmofra nkumaa ho? (Dw. 25:9; 138:6; 1 Kor. 14:20)
Kenkan Marko 9:33-37.
Dɛn na Yesu kyerɛɛ n’asuafo no faa dibea akɛse a wɔbɛpere ho? (Mar. 9:35; Mat. 20:25, 26; Gal. 6:3; Filip. 2:5-8)
Kenkan Marko 10:13-16.
Na henanom na wotumi bɛn Yesu, na dɛn na Kristofo mpanyimfo betumi asua afi ne nhwɛso yi mu? (Mar. 6:30-34; Filip. 2:1-4; 1 Tim. 4:12)